प्रदेश सरकारसँग दृढ दृष्टिकोण र इच्छाशक्ति नदेखिएको प्रदेश सभा सदस्यको आरोप
इसीमाना सम्वाददाता बीरगंज १५ पुष २०७७ 221 पटक पढिएको
प्रदेश २ सरकारसँग दृढ दृष्टिकोण र इच्छाशक्ति नभएको आरोप प्रदेश सभा सदस्यहरुले नै लगाएका छन् । जसले गर्दा प्रदेशमा पछौटेपन हटाउँदै जन चाहना अनुसार विकासका काम हुन नसकेको उनीहरुको ठहर छ ।
वीरगञ्जमा आयोजित तन्नेरीसँग प्रदेश सभा सदस्य कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य प्रल्हाद गिरी र भिमा यादवले २० वर्षदेखि थाति रहेको जनताको चाहना केही दिनमा पुरा नहुने बताउनु भयो ।
‘प्रदेश २ मा धेरै समस्या छ, तर जल, जंगल जमिन जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधन र जनशक्ति छ । तैपनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सृजना गर्न सकेन । सरकार सञ्चालन गर्ने अनुभवको कमी देखियो ।’ प्रदेश सभा सदस्य गिरीले भन्नु भयो “ ‘भाषणबाजीको काम गर्ने, एकैछिन ताली बजाईदिएपछि रमाउने किसिमका काम गर्ने, आधारभूत समस्या समाधानमा गर्न नजान्ने, सोच र ईच्छाशक्तिको अभाव देखियो ।’
उहाँले कर्मचारीहरु र केन्द्र सरकारले असहयोग गरेको, स्थानीय सरकारमा गैरराजनीतिक अनुभव र उद्देश्य स्पष्ट नभएका मानिस हल्लै हल्लामा जितेर आएको, तीन सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएकोे बताउनु भयो । तीनै सरकार छाडा देखिएपनि नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र नभएको उहाँको कथन छ ।
प्रदेश सभा सदस्य भिमा यादवले लामो समय जनप्रतिनीधि नहुँदा मान्छे छाडातन्त्रमा गईसकेको अवस्थामा उनीहरुलाई अंकुश लगाउन र नियन्त्रण गर्न नसकिएको बताउनु भयो । सामाजिक विचारधारा नै परिवर्तन हुन नसकेकोले सामाजिक विभेद कायम रहेको उहााको भनाई छ ।
‘अझैपनि महिलालाई पहिलेको जमानामा जस्तै प्रताडित गर्ने, स्वतन्त्र भएर हिँड्न दिईदैन, लैंगिक हिंसा उत्तिकै छ उहाँले भन्नु भयो , ‘झ्याल ढोका खुल्ला राख्नुहुन्छ भने चोर त घरमा पसेर चोरीहाल्छन् नी मैले यो कुरा भन्दा नराम्रो लाग्ला तर मोबाईल टिभी, फिल्म र ड्रेसअपले गर्दा नै विकृति फैलिएको हो । ’
प्रदेशको नाम नराख्दा दुई नम्बरी प्रदेश भनेर जिस्क्याउँन कहिले नाम र राजधानीको टुंगो लगाउनुहुन्छ त ? भन्ने तन्नेरीको जिज्ञासामा यादवले
‘अरुले वागमति प्रदेश, कर्णाली प्रदेश राखेका छन्, त्यसैगरि हामीले नारायणी प्रदेश राखेर भएन ? सोचीराखेका छौं, पाँच वर्षमा त अवश्य नाम राखिसक्छौं ?’
प्रदेश सभा सदस्य गिरीले नाम र राजधानीका लागि प्रयास गरेको भएपनि टुंगो नलागको र अब बस्ने संसद बैठकहरुमा छलफल हुने बताउनु भयो ।
युवा लक्षित काम गर्ने सोच आफूहरुको भएपनि जनस्तरबाट सडक, नाला, मठ मन्दिर धर्मशाला लगायतका भौतिक पूर्वाधार बनाईदिन माग आउने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
कार्यक्रममा सहभागी तन्नेरीहरुले प्रदेश २ मा लैंगिक हिंसा नियन्त्रणका लागि के कस्ता काम भईरहेको छ ? युवालाई लक्षित गरेर किन नराखेको ? प्रदेश विकासमा किन पछाडि छ ? जनचाहना अनुसार काम गर्न किन नसकेको लगायतका प्रश्न गरेका थिए ।
तन्नेरीहरुलाई गुनासो होईन, प्रश्न गर्ने बानीको विकास गराउन यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरिएको हाम्रो अभियान पर्साका संयोजक शिवनाथ यादवले बताउनु भयो । प्रश्नले जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उहाँको भनाई छ ।
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको क्षेत्रीय भेला र नगर स्तरीय संघर्ष समिति गठन
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहको विभिन्न स्थानमा अगुवा कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरिएको छ । पर्साको क्षेत्र नम्बर १ को परवानीपुरमा, क्षेत्र नम्बर २ को भेला सुगौलीमा सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा पनि १५१ सदस्यीय प्रतिगमन विरुद्धको संघर्ष समिति गठन गरिएको छ ।
पोखरियामा नेकपाको नगरस्तरीय भेला सम्पन्न, हरिनारायण रौनीयारका भाई राजेश रौनीयार नेकपामा प्रवेश
नेकपा पर्साका अध्यक्ष प्रभू हजराले नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री के.पी.ओलीको लोप्रियताबाट तर्सिएकाहरुले पार्टी भित्रैबाट षडयन्त्र गर्दा संसद बिघठनको निर्णय भएको बताउनु भएको छ ।
जनकपुरमा ओली पक्षको शक्ति प्रर्दशन, दाहाल नेपाल पक्षको दलको नेतामा महतो चयन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले नेतृत्व गर्नु भएको नेकपाले जनकपुरमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ ।
४५ औ मेलमिलाप दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेस पर्साको चियापान सम्पन्न
नेपाली कांग्रेस पर्साले ४५ औं मेलमिलाप दिवसको अवसरमा पर्सामा चिया पान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।